CISCO CCNA Kudzidzisa & Cisco Zvidzidzo
2. Shandisa Cisco Multicast v2.0
Kushandisa Cisco Multicast v2.0 Nzira Chinangwa:
Itai kuti Cisco Multicast v2.0 Zvidimbu zviitike:
4. CISCO CCNP Routing uye switching
CISCO CCNP Routing uye switching Zvido:
5. CISCO CCNA Routing uye Switching
CCNA Zvido Zvezwi:
Cisco CCNA ndiyo upiyona huri muHIT unobatsira masangano kubata mikana yehupenyu nekuratidza kuti zvinhu zvinoshamisa zvinogona kuitika kana iwe unofanirwa kushandiswa kare.
PaCisco vatengi vanovhura zvinhu uye chikamu chinokosha cheDNA yedu chirikuita masangano evanhu vanotsungirira uye kushanda navo kuti vaone zvavanoda uye kupa urongwa hunosimbisa kubudirira kwavo.
Pfungwa yekugadzirirwa iri kutungamira kunongedza hutano hwemakero yakange iine Cisco kubva pakatanga kwayo. Mumwe murume ainzi Len Bosack naSandy Lerner, vose vari kushanda kuStanford University, vaida kutumira email kune imwe nzvimbo kubva kumabasa avo akasiyana akange ari mune zvivako zvakasiyana asi havana kukwanisa nekuda kwekushayikwa kwekusha.
Chimwe chinhu chitsva chinofanirwa kugadzirirwa kuchengetedza nzvimbo dzakasiyana; uye sechikonzero chekusazarura muedzo wavo - shanduko yakasiyana-siyana yakagadzirwa.
Zvimwe zveCisco CCNA Training Course & Certifications zvinotaurwa pasi apa:
Dhiagramu Mutsva wePv6 Bootcamp (IPv6) Cisco Training on Demand course inotarisirwa kubatsira avo vanoziva iye zvino IPv4 vachida uye vachigadzirisa kuti vanzwisise kusiyana ne IPv6 vachida uye kufamba.
Dzidzo inotanga nekujekesa IPv6 inoda kuronga, uyewo dzimwe magungano matsva muPv6 iyo inodzinga Address Resolution Protocol (ARP) uye Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, semuenzaniso, IPv6 Neighbor Discovery Protocol (NDP).
Nzvimbo dzakasiyana-siyana dzePv6 nzvimbo dzinoongororwa nechinangwa chaunogona kuziva kuti unganzwisisa sei kusiyana kwePv6 multicast, inoshandiswa pakushandura pedyo, uye unicast adresses.
Yakaitika kare, aya ma modules anozivawo maitiro ne IPv6 kusvika kune zvinyorwa uye nzira inokosha neRouting Information Protocol (RIP) yePv6 (RIPng) uye Open Shortest Path First (OSPF) yePv6 (OSPFv3).
Iyi dzidzo inoshandiswa kune nyanzvi dzakadzidza dzinoda kunzwisisa zvakanyanya kwePv6.
Pakunopedza dzidzo iyi, unofanira kuva nekwanisi:
Gadzira IPv6 pasi rose uye pachevhesi pamushandisi interfaces
Ongorora kushandiswa kwemotokari uye kuti EUI-64 watchword inoshandisa sei interface ID 2016 Cisco pamwe chete nemigumisiro yayo.
Gadzirirai sangano rekubatanidza nzvimbo dzekugara nzvimbo dzeIndaneti
Shandisa zvinetso zvinotakura kuti uone zvinoshandiswa zvekutengesa uye muvakidzani kuzivisa mushure me IPv6 ping
Gadzira OSPFv3 uchishandisa nzvimbo dzakawanda, semuenzaniso, nzvimbo dzemauto uye kwete nzvimbo dzakawanda dzakashata (NSSA)
Kugadzirisa OSPF vavakidzani pamusoro pevanhu vasina kubhabhatidza vakawanda vanoenda ku (NBMA) rondedzero yekuendesa kuronga
Gadzira RIPng yePv6
Ita bidirectional redistribution yeOSPFv3 muRIPng
IPv6 Boot CampNzira Dzinotarisirwa:
Usati watora chidzidzo ichi, iwe unofanirwa kuva nekwanisi yekuita zvinotevera:
Rondedzera kuronga zvidzidzo zvekare uye kuvaka LANs zvakananga
Simbisa kuwanikwa kweIndaneti
Iva neCCNA® certification, kana yakaenzana
Gadzira, chinyorwa, nekuongorora RIP, Enhanced IGRP (EIGRP), uye OSPF
Rondedzera IPv4 chikamu chekugadzira
Tsanangura Internet Control Message Protocol (ICMP) uye ARP
Kushandisa Gwaro reCisco Multicast (MCAST) v2.0 yedzidzo yevashandi vezuva rezuva mashanu inodzidzisa zvakakosha zvehuwandu hwePI, iyo inosanganisira maitiro akawanda, mabhuku, vagashiri, masangano ehurumende, uye maIt multicast routing magungano, (somuenzaniso, Protocol Independent Multicast, PIM) inoshandiswa mukati mega roga rinotarisa nzvimbo (intradomain). Nhau dzekutsinhanisa LAN mamiriro ezvinhu uye yakasimba IP yakawanda inodzivirirwa zvakare.
Dzidzo yacho inopa mhinduro dzakananga kuti zvirongwa zvakananga zvePI yakawanda mukati memutengesi kana mutengi agadzirise. Mapurogiramu ezvidzidzo anopa mitemo nekugadzirisa zvinetso zvekushandiswa kwePI multicast paCisco switches. Mabhizimisi anopa pasi pemaoko maoko-pane chiitiko chinotarisirwa kutumira zvakanakira IP multicast.
Mushure mokunge tapedza dzidzo iyi, mudzidzi achava nekwanisi yekuzadzisa zvinangwa izvi:
Ipa IP mazano akawanda, kutarisa muenzaniso unobatsira wePP kuwanda uye kufambira mberi kuratidzira muhutano hwePI, kuziva hutachiwana hwePI uye zvigadziro zvakabatana, uye kusarudza marudzi akasiyana-siyana ezvinyorwa zvinoshandiswa nechinangwa chinopedzisira chakanaka kuti inzwisise iyo IP yakawanda yemhando yezvinyorwa uye nzvimbo dzakasiyana-siyana dzematunhu akawanda kune mamwe mazano ekubatanidza nhete dzero, uye kugadzirisa zvigadzirwa zvekumanikidzira mitozi mizhinji mumunda weLAN.
Purogiramu Yechirongwa Chekuita Izvo Zvimwe Zvisingabatsiri (PIM-SM) seyiyo yakagadziriswa yakawanda inogadziriswa yakawanda yeP IP kugadziriswa kugadziriswa kuti iite mumitemo yegungano rekushanda uye zvinhu zvisinganyatsogadziriswa, ivai vakasununguka ne determinism inowanikwa ne scanty mode multicast magungano, uye kuronga uye kutumira PIM- SM mune yakaoma IP multicast kuronga masangano.
Idzi ruzivo uye ruzivo izvo mudzidzi anofanira kunge aine asati aenda kudzidzo iyi ndezvipi zvinotevera:
Cisco Certified Network Associate (CCNA) chiyeuchidzo.
Shandisa kunzwisisa nekugadzirisa unyanzvi hweCisco switches uye LAN switches.
Kuita Cisco IP Routing (ROUTE).
ICisco Data Center Unified Computing Support Specialist inotarisirwa kuongorora ruzivo rwomudzidzi rwezvakakosha zveCisco Unified Computing System uye kukwanisa kwavo kugadziridza kodzero yakanaka yeDesign Center. Cisco Data Center Unified Computing Support Nyanzvi dzinyanzvi dzichaedzwawo pane zvikamu zvinotevera:
Cisco Unified Computing System mune basa rekuita mapurazi uye nzira yekuchinja
Kuchera mhiri kumhuri yeCisco Nexus yemhuri.
Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing uye Switching certification inobvumira kukwanisa kuronga, kugadzirisa, kusimbisa nekutsvaga mitambo yepakati penharaunda iri pedyo nepamusoro-soro uye basa pamwe chete nevane masimba ekuchera makumbo ekuchengeteka, inzwi, kure uye mavhidhiyo akarongwa.
ICNN Routing uye Kuchinja chiziviso zvakakodzera kune avo vasiri pasi pegore rimwe remasangano ekugadzirisa masangano uye avo vakagadzirira kuwedzera maitiro avo nekushanda zvakazvimirira pane zvakaoma zvirongwa.
Vanhu avo vakagadzira CCNP Routing uye Kuchinja vakaratidza unyanzvi hunodiwa mune zvikamu zvebhizimusi makuru, somuenzaniso, kuronga kugadzira, huni hunovaka, hugadziri hwomugadziri kana hunyanzvi hwehurongwa.
Nzira yekugadzirisa uye kushandura magungano kubva kune ichi chiyeuchidzo ichapa kusingagumi kwekugadziriswa sezvo maitiro aya akafanana zvakakosha mumasangano ezuva ranhasi uye yakagadzirirwa kuronga zvinhu zvehupenyu.
Chinyorwa Cisco CCNA Routing uye Kuchinja chiziviso kana chero Cisco CCIE chiyeuchidzo chinogona kuitika sechinhu chinokosha.
Sezvo Mabhizimisi anotamira kune vatungamiri vakatevedzera mitemo, chikamu uye unyanzvi hunotarisirwa wehutano hwehutano huri kufambira mberi uye hunokosha kune imwe nguva chero ipi zvayo mumangariro yezvino.
Kuti urongwa hwehurongwa urwu hufambe, CCNA Routing uye Kuchinja chiziviso hakungokugadziri iwe nekudzidza kwekufambira mberi kwenheyo, asi hutsigiro iwe unoramba wakabatana nehutano hwakakosha hunodiwa mukugadzirisa kukanganisa zvidzidzo.
ICisco Certified Network Associate Voice (CCNA Voice) inobvumira kurondedzera ruzivo rwepamusoro uye unyanzvi hunodiwa kuti utungamirire izwi rinoronga. ICisco CCNA Voice certification inotsigira kuti inyanzvi inotarisirwa inogadzirirwa zvimwe zvikamu zvebasa mukufambira mberi kwezwi, somuenzaniso, inzwi rekufambira mberi kwezwi, izwi rinyanzvi, uye mutungamiriri wezwi. Ini
t inobvumirana nehutano muViIP inoshandiswa, semuenzaniso, IP PBX, kutaurirana kweP, handset, call control, uye foni message zvirongwa.
ICCNA Voice certification inoongorora maitiro uye ruzivo rwakatarwa neCisco Unified Communications Manager. Inowanzoshandiswa neshamwari dzakawanda, semuenzaniso, hurumende, masangano makuru, uye zvunivhesiti.
Uyezve, CCNA Voice Certification nyanzvi yekuongorora uye ruzivo rwakanzwisiswa neCisco CallManager Express (CME) uye Cisco Unity Express (CUE) inogadziriswa inoshandiswa neshamwari dzeduzhinji uye duku, somuenzaniso, masangano ane pasi pevamiririri ve2,000, masangano ezvitoro, uye zvishoma chikoro zvikamu.
Chero chipi zvacho chakanyanya Cisco CCENT, CCNA Routing uye Kuchinja kana chero Cisco CCIE chiyeuchidzo chinogona kuitika sechinhu chinokosha.
Iyi kuongorora kunosimbisa kuti tariro inobereka ine ruzivo uye ruzivo rwakakosha ku:
Saronga uye kuita zvakanakira kugadzirisa pane zvakaoma zvinotungamira uye zvakasiyana-siyana mitambo
Shandisa innovation based based maitiro uye nzira yakashandiswa ITIL-inogadzirisa nzira yekugadzirisa nekugadzirisa matambudziko
Nzira iyi iripo ndeyekudzidziswa kwakakosha kwekuongorora uku.
Troubleshooting nekuchengetedza Cisco IP Networks (TSHOOT)
Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) inobvumira kurondedzera kudzidza kwedzidzo uye unyanzvi hunodiwa kuchengetedza Cisco mitambo.
NeCCNA Security certification, chirongwa chinonyatsoratidza hutano hunofanirwa kusimbisa hurongwa hwekuchengeteka, kuona njodzi uye kusagadzikana kwemasetere, uye kuenzanisa zvengozi dzekuchengeteka.
ICCNA Security Educational modules inokurudzira nzvimbo yekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa, kugadziriswa, nekugadzirisa nekucherechedza zvishandiso zvekugadzirisa kutarisa kwakarurama, kuvanzika uye kugona kwemashoko nemagadgets, uye kukwanisa mukufambira mberi uko Cisco inoshandisa sechikamu chekuchengetedzwa kwayo.
Chero Cisco inokodzera CCENT, CCNA Routing uye Kuchinja, kana chero chero chikwata cheCCIE chinogona kuita sechinhu chinokosha.
3 IBM Training Course Munhu wese Ari Mu Industry Anofanira Kushandisa